Qodobka loogu talagalay Luqadda doofaarka macaan
Daboolka guriga Cunnooyinka Kuwa kale Maaddooyinka Khudaarta Digirta
Dilka doofaarka ee macaan
Waxaan karnaa carrabka doofaarka Cuntada doofaarku waxay leedahay tayada dhadhanka sare leh isla markaana isla markaa waxay ku habboon tahay cuntada iyo xitaa cuntada ilmaha. Waxay ka kooban tahay tiro badan oo ah walxaha bayolojiga firfircoon, lecithin, fitamiin B, fosfooraska. Waxaan soo jeedinayaa in aan ku baraarujiyo habka loo cuno carrabka hilibka doofaarka iyo sii wadida diyaarinta caleenta cayayaanka leh. Digirta caddaanku waxay u fiican yihiin qashinka: la kariyey ama qasacadaysan. Iyada oo digirta qasacadaysan, daadi juice, ku diiri foorno ama microwave oo u adeega sida saxan dhinaca. Haddii la rabo, waxaad samayn kartaa baradho la shiiday.
Carrabka doofaarka 600 g
Thyme (Thyme) cusub 2 g
Bink casuus ah 0.5 tbsp. l.
Baag caleen 2 pcs.
Digirta caddaan, qasacadaysan 500 g
Isku darid geedo talyaani ah 2 g
Tallaabada 1aad Waxaad u baahan doontaa inaad u baahato carrabka hilibka doofaarka - 3 gogo ', xawaashyo kala duwan iyo dhir udgoon, subag, milix iyo digir cad - si aad u kariso saxanka.
Tallaabada 2-aad ee Porcine waa la dhaqaa, ku rid karkaraya, ku kari ilaa 5 daqiiqo kadibna biyo ka daadi.
Tallaabada 3 Geli dhejiska luqadaha cusub ee nadiifka ah ee biyo kulul nadiif ah iyo caleemaha casaanka ah (waxaad u baahan tahay 8 nafaqo), cusbo yar oo cusbo ah iyo kariyo kuleyl dhexdhexaad ah 1.5 saacadood.
Talaabada 4 Ka dib markaad luqadaha diyaarka ah u diyaarso biyo qabow muddo 1 daqiiqo ah si aad uga dhigto mid sahlan in la dhimo filimka.
Tallaabada 5 Afafka la gooyey waxaa lagu jarjaraa shanqad oo dherer ah.
Talaabada 6 Dufcada caaryada wax lagu dubo subagga ama saliidda cuntada oo ku dhaji carrabka hilibka doofaarka ee ku jira dhowr lakab, ku dar digaagada cusub ee dhirtaada. Ku dabool afafka subagga subagga oo ku rush aad cusbo karsan, tusaale ahaan, geedo talyaani ah ama aad jeceshahay. Ku dheji caaryo leh afafka foornada ilaa 15 daqiiqo 150 ° C
Tallaabo 7 Carrabka lo'da ah ee kalluunka waa diyaar. Maraqa saxanka waa saliid karis ah oo soo baxday markii la dubayo.
Fillet of salmon leh olive caleen
Salad diiran leh digirta
Salad leh tuun iyo digir
Dalagyo digir ah Dal Tarkari
Digirta yaanyada jiilaalka
Mashquul boodh ah oo leh dhogorta lo'da
Eyee noocee ah ayuu cunuggu leeyahay?
Magacyada gabdhaha ku jira jadwalka kaniisadda
Maxay gabdhaha u jecel yihiin in ay isu sawiraan?
Macnaha iyo taariikhda bouquet ee aroosadda
Cunto-khudradda nadiifinta maqaarka
Maxaa kuu sheegi doona dahabka: midabka dhagaxyada iyo dabeecadaada
Waa maxay lugaha quruxda badan
Faytamiin Cab Waji Macaan
Noocyada jirdhiska iyo ujeedkooda
Sida loo xiro qaanadda warqadda
Casserole joodariga jilicsan oo leh cagaar cagaaran
Muuji dhibcaha naftooda
Sida loo kariyo jelly laga bilaabo macaanka iyo istaarijka?
Astaamaha dhibaatooyinka da'da dhexe ee ragga
Nafaqada dufanka leh jiiska
Xayawaanka qallalan ee qalalan